Shina Piping System Manufacturing and Factory | Jrain
Ny fantsom-boa fibreur dia misy ny fantsona fibre vita amin'ny fantsom-bidy, fantsona fantsom-baravarana, fantsom-bistika, fantson'ny laminate roa (miaraka amin'ny PVC, CPVC, PE, PP, PVDF, sns) sy ny sisa
Ny fanamboarana rindrina ny rafitra fantsona fiberglass dia misy lay telo:
1. Liner: mamaritra ny fanoherana mahomby indrindra amin'ny antonony.
2. Rafitra strastika: manome tanjaka mekanika avo sy fanoherana ny vesatra.
3. Ny akanjo ambony: miaro ny rafitra fantsona amin'ny toetr'andro, ny fitrandrahana simika ary ny taratra UV.
Izy ireo dia malaza be amin'ny indostrian'ny orinasa maro noho ireo tombony azo eto ambany:
1. Fahaiza-manao mifanaraka amin'ny karazana fepetra manohitra azy io
2. Lanja maivana (latsaky ny 20% amin'ny vy, 10% beton)
3. Hery mahery vaika ho lanja (mahery noho ny vy amin'ny lanja mitovy lanja)
4. Coefficient of friction (> 25% tsara kokoa noho ny vy)
5. Ny fahamarinan-toerana tsara
6. Fihetsika malefaka ambany
7. Vidy maharitra mandritra ny fotoana maharitra
Ny fomba fiasa maro samihafa dia misy amin'ny sodina fiberglass toy ny joint joint, spigot ary joint bell, flange joint, lock joint ary ny hafa.
Ny fizotran'ny fantsona fibre mahazatra dia:
1. Rivo-drivotra, hamafin'ny famafazana sy matin'ny rivotra;
2. Manaova fanafody liner sy linera;
3. Ampio ny zavatra mifangaro na dovitra sy rihitra (miankina amin'ny famolavolana) hampitombo ny hatoka;
4. Manaova fofona hoop sy helix mba hahatontosana ny fepetra lava sy ny hoop;
5. Tandremo ny fantsona misy tara-masoandro lavitra;
6. Hetezo sy fikosoham-bary ny faran'ny sodina hahatonga ny lakolosana sy antsokosoko hozatra (miankina amin'ny fomba fiarahana);
7. Hesao ny fantsona avy amin'ny mandrel miaraka amin'ny fitaovana hydraulic;
8. Ny fitiliana hidrostika ho an'ny sodina. Raha manam-pahaizana dia avoahy ny fantsona.
Namolavola ny foza ary nanolotra fantsona fiberglass hameno ny fenitra nasionaly sy iraisam-pirenena maro ao anatin'izany ny DIN, ASTM, AWWA, ISO sy ny maro hafa. Ny halavan'ny fenitra fantsona iray dia 6m na 12m. Ny halavan'ny namboarina dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny fanapahana ihany koa.
Previous: Dwi Laminate Products
System Piping FRP
Fitterglass fittings dia matetika vita amin'ny hand-up dingana, misy votoaty resin avo. Ny endrika samihafa dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny bobongolo. Ny volon-koditra samihafa dia azo soloina amin'ny fepetra isam-paritra sy serivisy samihafa. Izay fangatahana manokana momba ny habeny sy ny endriny dia azo alaina amin'ny fangatahana. Fitterglass fittings dia malaza satria nasehony: • Hery lehibe mifandraika amin'ny lanja • insulation elektrika sy thermaly • Mifady amin'ny corrosion sy simika • R ...
Ny Jrain dia afaka mamolavola fantsom-bolo vita amin'ny fibre vita amin'ny lamba vita amin'ny alàlan'ny alàlan'ny rindrambaiko maoderina toy ny FEA (Finement Element Analysis), Auto CAD, sns sns. Duct miaro amin'ny alalàn'ny fangatahana herinaratra FGD; 2. Fandringanana ny tanana na naratra mafy; 3. Zavamaniry maromaro hanaraha-monina ny tontolo iainana 4．Rivotra mirehitra afo hahatratrarana ny lelafo misy kilasy 5．Design engineering, cal ...
Masinina fanamafisana GRP, hamolavola, Mamatotra fanamafisana FRP, Nohavaozina Fiberglass, Famolavola grating, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass,